Miara-miasa amin'ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany ny Fanjakan'ny fizahantany Eswatini
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Miara-miasa amin'ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany ny Fanjakan'ny fizahantany Eswatini
Minisitry ny fizahantany-fizahantany-iainana-Moses-Vilakati-1
Ny Fanjakan'i Eswatini, fantatra taloha amin'ny anarana hoe Swaziland dia niditra ho mpikambana ao amin'ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany ho mpikambana farany ao aminy.
Ny minisitry ny fizahan-tany sy ny tontolo iainana Moses Vilakati, izay manan-kaja, dia hanatrika sy handray anjara amin'ny fanombohana ofisialy fa ny Birao fizahantany afrikanina ao amin'ny World Travel Market Africa any Cape Town, Afrika atsimo amin'ny 11 aprily.
Linda L. Nxumalo, ny Lehiben'ny Executive Executive ao amin'ny Eswatini Authority dia hanatrika izany.
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpanjaka sisa tavela any Afrika, ny kolotsaina ary ny lova dia miorim-paka lalina amin'ny lafin-javatra rehetra? Amin'ny fiainana Swazi, miantoka fiantohana tsy hay hadinoina ho an'ireo rehetra mitsidika.
Ary koa ny kolontsaina manankarena, ny be fitiavana amin'ny vahoaka dia mahatonga ny mpitsidika rehetra hahatsapa fa tena tongasoa sy azo antoka tokoa izy ireo.
Manampy izany a toerana mahavariana ? ny tendrombohitra sy lohasaha, ala sy lemaka; miampy tahiry biby manerana ny firenena izay onenan'izy ireo Ny dimy lehibe,? ary ny mpitsidika dia manana izay tsara rehetra momba an'i Afrika ao amin'ny firenena kely iray nefa feno endrika sy mandray olona.
Eswatini dia Afrika amin'ny teny fohy. Mety ho cliché izy io saingy tsy misy fomba tsara kokoa hanazavana ny Eswatini (Swaziland). Ity firenena madinidinika ity - iray amin'ireo mpanjaka farany any Afrika - dia manana harem-be tsy manam-paharoa. Ireo tia ny natiora dia afaka manara-maso ny rhino any anaty ala iva na mitady vorona tsy fahita any amin'ny avo be. Ny mpahay tantara dia afaka mitsidika ny toeram-pitrandrahana tranainy indrindra fantatra eto an-tany na manaraka ny lalan'ny fanjanahan'ireo mpifindra monina tany am-boalohany. Ary ny vultures ara-kolotsaina dia afaka mampientanentana an'i Umhlanga sy fety hafa, satria mankalaza ny fomban-drazana taloha amin'ny fomba mahavariana i Eswatini. Ny hetsika manomboka amin'ny mitaingin-tsoavaly sy ny rafting amin'ny renirano ka hatramin'ny golf ary spa mafana dia manome fientanam-po sy fialan-tsasatra amin'ny refy mitovy. Ankoatr'izay, Eswatini dia sariaka, azo antoka ary voafintina ka tsy misy na aiza na aiza misy fiara mihoatra ny adiny roa miala ny renivohitra. Ka inona no andrasanao? Firenena miforona tonga lafatra indrindra eto Afrika dia miarahaba anao Swazi mafana.
Eswatini, fantatra taloha amin'ny anarana hoe Swaziland, dia manana faritra fitantanana 4 fa ny fizahantany kosa dia mizara roa mora kokoa amin'ny faritra 5, izay samy manolotra karazana mahaliana sy traikefa isan-karazany. Raha maka ny teboka amin'ny kompà amin'ny lohateny izy ireo, ny faritra fizahan-tany tsirairay avy dia azo asongadin'ireo zava-manintona sy traikefa hita ao anatiny - dia ny fahitana mahavariana, ny traikefa ara-kolontsaina manan-karena na ny fihaonan'ny biby dia. Raha mifantoka amin'ny faritra iray manokana dia ahafahan'ny mpitsidika manatri-maso ny toetrany manokana, ny fifaliana avy amin'i Eswatini dia ny haben'ny habeny mamela ny faritra ho 'mifangaro sy hifanaraka' amin'ny fitsidihana tokana, na dia iray andro monja aza!
Tsy misy tsiambaratelo lehibe momba ny dia lavitra Eswatini - mba hiaina ny karazany miavaka amin'ny firenena, fitsidihana faritra maro araka izay azo atao (farafaharatsiny 3)! Saingy tsy misy fisarihana olona mihoatra ny adiny 2 miala amin'ny hafa, dia mora tokoa ny mitsidika azy rehetra amin'ny filaharana sy mamorona fitsangatsanganana natao ho an'ny zavatra takinao manokana nefa tsy sendra dia lavitra.
Eswatini afovoany: Tanindrazana ara-kolontsaina
Na dia ny kely indrindra amin'ny faritra fizahan-tany aza dia i Central Eswatini no misy ny renivohitry ny firenena, tanàna faharoa lehibe indrindra, tobin'ny fizahantany ary faritra indostrialy lehibe. Ny tanàna roa dia Mbabane sy Manzini, 25 kilaometatra monja no elanelany ary eo anelanelany dia ny lohasaha Ezulwini izay lasa ivon'ny fizahan-tany any Eswatini, ary ny tanindrazana Royal Lobamba izay eo an-toerana ihany koa ny Parlemanta. Miaraka amin'ny toeram-piarovana bibidia mora azo indrindra ao amin'ny firenena ao Mlilwane sy Reserve Reserve any Mantenga miaraka amin'ny riandrano mahafinaritra sy vohitra ara-kolontsaina natsipiny fatra tsara, ity dia faritra manan-karena be ary safidy manintona lehibe ho an'ny mpitsidika rehetra Ny fametrahana azy eo afovoany dia ahafahana miditra mora any amin'ireo faritra hafa koa.
Ny faritr'i Eswatini Avaratra Andrefana dia eo amin'ny havoana avo indrindra ary tandavan-tany mampihetsi-po sy mahavariana. Ireo havoana misy hozatra sy lohasaha falehan-driaka mampihetsi-po dia mamorona ny sisiny atsinanan'ny fidiran'ny Drakensberg any Afrika atsimo ary satroboninahitry ny tampon'isa roa avo indrindra ao amin'ny firenena - Emlembe (1,862m) sy Ngwenya (1,829m). Faritra misy hatsaran-tarehy voajanahary miavaka, ny mpitsidika dia manana safidy betsaka azo atao, ao anatin'izany ny fitsirihana ireo tahiry voajanahary ao Malolotja sy Phophonyane (mandeha an-tongotra, mitaingina soavaly, bisikileta an-tendrombohitra na koa mamakivaky ireo tampon-kazo amin'ny zip-tariby!), Manadihady ny fahagolan'i Nsangwini zavakanto rock, miaina an'i Bulembu - tanàna matoatoa nateraka indray tamina tendrombohitra be voninahitra ary nanao dia an-tsambo teny amin'ny hadilan'i Maguga mahafinaritra. Ireo zaridaina ao amin'ny faritra dia milahatra mora foana na tsy lavitra ny lalana MR1, izay manomboka 15km andrefan'ny Mbabane ary mipaka amin'ny sisintanin'i Afrika Atsimo any Matsamo (30-45mn avy any Kruger NP). Manodidina ny 1 ½ ora fotsiny vao mitondra ny halavan'ny MR1.
North East Eswatini: Fiarovana sy fiarahamonina
Ny North East Eswatini dia miorina eo amin'ny lemaka iva - malalaka midadasika - miaraka amin'izay ny tampon'ny tendrombohitra Lubombo miakatra atsinanana hamorona ny sisintany miaraka amin'i Mozambika. Izy io dia anjakan'ny velaran-tany misy siramamy midadasika izay nipoitra tamin'ny taona 1950 ary ny klioban'ny firenena dia azon'ny mpitsidika ankafizina. Ireo faritra misy ala mikitroka (mitovy amin'ny Kruger Park any Afrika atsimo) dia mahatonga ny firenena safari tonga lafatra ary io faritra io dia misy tahiry maromaro (azo alaina avy amin'ny làlam-pirenena MR3) izay miara-mandrafitra ny Conservancy Lubombo. Ny valan-javaboary nasionaly Hlane no lehibe sy manan-karena indrindra amin'ny lalao, miaraka amin'i Mlawaula sy Mbuluzi Nature Reserve izay manome fidirana mora mankany amin'ireo faritra mahafinaritra sy tsy voakitika. Ny tendrombohitra dia wild ary tsara tarehy miaraka amin'ny tanàna lavitra, ny iray amin'izany, Shewula, dia manome ohatra mamirapiratra momba ny fizahan-tany amin'ny fiarahamonina sy ny fidirana amin'ny tahirin-javaboary hafa.
South East Eswatini: Bibidia akaiky
Any amin'ny faritra iva no misy an'io faritra io. Izy io no fonenan'ny toerana misy ny safari voalohany an'i Eswatini, ny Mkhaya Game Reserve, fantatra eran'izao tontolo izao noho ny traikefa niainany, izay mifaninana amin'ny any Afrika. Fonenana miparitaka ihany no misy fa misy tanimbary marobe manondraka avy amin'ny renirano lehibe ao amin'ny firenena, Usuthu, izay misy rafting rano fotsy. Nisela, any amin'ny farany atsimo-atsinanana dia manome traikefa safari fanampiny.
Ny ankamaroan'ny faritra atsimo andrefan'i Eswatini dia miorina eo amin'ny havoana an-tampon'ny havoana mivelatra voahodidin'ny renirano lehibe izay namorona lohasaha sy lohasaha mahavariana. Tsy mahagaga raha misy fitsangantsanganana be dia be atolotra any amin'ny faritra kely tsy dia misy fitsidihana - Mahamba Gorge sy ilay efitra Ngwempisi mahatalanjona. Nkonyeni Golf Estate dia manolotra hetsika isan-karazany amin'ny faritra iray amin'ny hatsaran-tarehy voajanahary miavaka rehefa miditra ao amin'ny Grand Valley ianao mianatsimo avy any afovoan'i Eswatini. Izy io koa dia faritra misy toerana mahaliana manan-tantara - ny fiangonana voalohany ao amin'ny firenena (izay mbola azo tsidihina ao Mahamba), ary renivohitry ny fombafomba voalohany ao Nhlangano.
Nahaliana ny mpitsidika ny kolontsaina nentin-drazana Eswatini. Miharihary ny antso avo: nahavita mitazona fomban-drazana hatramin'ny andron'ny fanjanahan-tany ity Fanjakana kely ity ary, na eo aza ny fanamby rehetra amin'ny maoderina, dia mijanona ho fototra iankinan'ny fiainany ara-kolontsaina. Ny fanjakan'ny mpanjaka no ao am-pony, izay mampifamatotra ny firenena amin'ny fety sy fankalazana. Tsy tranom-bakoka velona ny fanjakana, mazava ho azy, fa ny zavatra ho hitanao - ny loko, ny akanjo ary ny firakotra - no tena izy fa tsy ny indostrian'ny fizahantany. Ary ny fombafomba ara-pivavahana toy ny Umhlanga, na Reed Dance, dia anisan'ny mampiavaka azy indrindra eto amin'ny kaontinanta. Tadiavo ny volom-borona mena amin'ny ligwalagwala, na turaco volomparasy volomparasy, izay manondro ny fiandrianan'ny mpanjifa.
JEREO NY kolontsaina
Ny karazan-javakanto sy toeram-ponenan'i Eswatini manan-karena dia manome biby sy zavamaniry be dia be ao aminy, miaraka amin'ireo karazan-javamaniry maro be mahatalanjona amin'ny fenitra eropeana rehetra. Tsy dia lehibe ny firenena manolotra traikefa lalao lehibe, saingy manana faritra arovana 17 izay ahitana karazan-karazany marobe, anisan'izany ny 'Big 5' tadiavina. Ary koa amin'ny maha-iray amin'ireo toerana tsara indrindra eto amin'ny kaontinanta mahita rhino (mandeha an-tongotra ary koa amin'ny 4 × 4 ary mahita samy mainty sy fotsy), Eswatini koa no toerana mety indrindra hifaneraserana amin'ireo zavaboary kely kely matetika tsy jerena amin'ny safari any an-kafa, ary paradisan'ny mpiambina vorona io.
JEREO NY WILDLIFE
Eswatini dia tany kely misy faravodilanitra lehibe. Avy any amin'ny havoana any amin'ny havoana Andrefana ka hatrany an-tampon'ny havoanan'i Lubombos atsinanana, dia tsy misy fiolahana amin'ny lalana izay tsy manome fahitana hafa manaitra. Ary miaraka amina tsangambato vatolampy sary vongana, vohitra mahafinaritra ary renirano miolakolaka hameno ny zana-pikarohana, dia potika tanteraka ilay mpaka sary. Miova tsy tapaka ny hazavana, indrindra amin'ny vanim-potoana orana, rehefa mirongatra rahona matevina ny oram-baratra, ary avy eo aorian'ny oram-be, avelao manga ny lanitra. Izay mpitsidika ilay Fanjakana dia mety hanao ratsy mihoatra noho ny fivezivezena fotsiny eny an-tampon'ny havoana sy lohasaha ary hankafy ny fijery tsy miova momba ny toerana mahafinaritra sy ny tena tany efitra.
JEREO NY SARY
Eswatini dia toerana tsy azo lavina fa toerana iainana atsimon'i Afrika! Ny velaran-tany miovaova dia manome ny fotoana mety indrindra hanaovana hetsika faran'izay mahavariana. Rano fotsy amin'ny maraina ary fitsangatsanganana an-tampon'ny Canopy amin'ny tolakandro - angamba na dia amin'ny lalao lalao hariva aza! Ny abseiling, ny rafting, ny cave, ny fiakarana ary na ny bisikileta quad aza dia zavatra atolotra amin'ity firenena feno adrenalinina haingana ity.
Misy maromaro voaorina tsara mpandraharaha fitsangatsanganana sy hetsika amin'ny Eswatini izay afaka manampy anao handamina ny fiainanao.
JEREO NY ADVENTURE
Ny kolontsaina nentin-drazana an'i Eswatini dia nahita ny fomba nampiavaka azy tamin'ny fombafomba isan-karazany nandritra ny taona natao tamin'ny ambaratonga mahavariana. Ireto dia hetsika ara-kolotsaina velona izay, mandrara ny solomaso solomaso sy finday hafahafa, tsy niova firy tao anatin'ny taonjato roa. Tsy tokony hatao ambanin-javatra, ny taranaka ankehitriny dia namorona festival mozika sy zava-kanto vaovao sy mavitrika izay nametraka haingana laza malaza iraisam-pirenena. Miaraka amin'ny hazakazaka bisikileta an-tendrombohitra mahaliana sy hetsika ara-panatanjahantena sy kolontsaina hafa hita nandritra ny taona, ny kalandrie Eswatini dia manan-karena sy manome valisoa.
JEREO NY ZAVATRA MISY
Ny fanatanjahan-tena toy ny kalesy, tenisy, filomanosana dia hita ao amin'ny hotely sy trano fandraisam-bahiny ary koa ny Country Clubs amin'ny Sugar Estates. Royal Swazi Spa any amin'ny lohasahan'i Ezulwini sy Nkonyeni atsimo no misy ny taranja golf tsara indrindra ao amin'ny firenena, samy manana taranja fiadiana ny tompondaka 18 ary misy fomba fijery tsara ho azon'ilay mpilalao golf rehefa nitety ilay làlana izy ireo. Misy ihany koa ny jono any amin'ny tohodrano sy renirano maro manerana ny firenena, miaraka amin'ny trout, trondro tigra ary karazan-javaboahary maro karazana hita.
Misy fikambanana maromaro miasa ao Eswatini izay manome fotoana an-tsitrapo an-tsitrapo, na hiasa miaraka amin'ny bibidia sy ny fiarovana azy io, ny asa an-tsitrapo ara-tsosialy, na ny mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny fanatanjahan-tena. Betsaka ny programa azonao idirana mba hamela marika tsara amin'i Eswatini.
JEREO NY VOLUNTEERING
Misy fampahalalana bebe kokoa momba ny fizahan-tany Eswatini ao amin'ny www.anabemainte.com
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany sy ny hetsika fandefasana azy dia hita ao amin'ny www.africantourismboard.com
Fizahantany momba ny harena ankibon'ny tany any Ghana? Tokony ho Valan-javaboary ve ny tahiry ala Atewa?
Fanatrehana fampakaram-bady Indiana: Fotoana tombana fizahan-tany